Bathini abasebenzisi ngokuphathelele ... | Oxford isiXhosa Living Dictionaries
Ikhaya Bathini abasebenzisi ngokuphathelele le nkqubo
Njengenxalenye yephulo le-Oxford Global Languages (OGL) sisebenza ngokusondeleyo nabantu bolwimi lwasekuhlaleni ukuze sakhe size sandise izichazi-magama eziphilayo. Injongo yethu kukuba abasebenzisi bazive beyinxalenye yenkxaso nokuphuhlisa amancedo olwimi lwabo.
Uninzi lweelwimi zethu zixhaswa ngamaTsha-ntliziyo eeLwimi zasekuhlaleni: abantu abakuthanda egazini ukukhuthaza nokuxhasa iilwimi zabo. Ezinye zeewebhusayithi zethu ze- OGL zikwalawulwa ngabaPhathi beeLwimi zasekuhlaleni, abasebenza namaTsha-ntliziyo oLwimi kunye nabakwa-Oxford Dictionaries ukuze benze oko sikwenzayo kube kokufanele abantu abanikela inkonzo kubo.
Bukela uVictor Mojela, oliTsha-ntliziyo Lolwimi lweSisuthu saseMntla, encokola ngokubaluleka kwale projekthi kulwimi lweSisuthu saseMntla.
UDr Khumalo liTsha-ntliziyo loLwimi lwesiZulu Kwi-Living Dictionary. Ungafunda okungakumbi malunga noko akucingayo ngeprojekthi ye-OGL, nendlela eyichaphazela ngayo ulwimi lwesiZulu, apha: